Public Health Concern सरकारले गर्यो स्थानीय तहको वर्गीकरण : तपाई बसेको ठाउ दुर्गम कि सुगम ?(७५३ तहको विवरण) – Public Health Concern
काठमाण्डौ – सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । राज्य पुनर्संरचनापछि पहिलो पटक स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण हुन लागेको हो ।
साथै वर्गीकरणले कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकास, पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका प्राथमिकता तय गर्न समेत उपयोगी हुने उल्लेख छ । मन्त्रालयले केही दिनमा नै अन्तिम सूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । उज्यालो अनलाईन
कुन स्थानीय तह कुन वर्गमा ? हेर्नुस् प्रारम्भिक प्रतिवेदन :